समाचार - धातु प्याकेजि ofको भूमिका
१. धातु प्याकेजिंग उपभोक्ता द्वारा यसको बहुमुखी प्रतिभा र बहुमुखी प्रतिभाको लागि मान्यता प्राप्त छ। मेटल प्याकेजिंग जताततै आधुनिक दैनिक जीवनमा देख्न सकिन्छ। यसको दिगो विकास र तल सूचीबद्ध उल्लेखनीय सुविधाहरूले यसलाई २१ औं शताब्दीको लागि एक आदर्श प्याकेजि solution समाधान बनाउँदछ।
धातु प्याकेजि ofको फाइदा:
* उत्पादलाई लामो समयको लागि सुरक्षित गर्नुहोस्; बन्द अवस्थामा, खाना पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्न सकिन्छ यो बन्द भएको क्षणबाट।
* उत्पाद अपशिष्ट रोक्नुहोस्
प्याकेजयुक्त पोषकहरू राख्नुहोस्; प्याकेज गरिएको उत्पादनहरूको शेल्फ लाइफ विस्तार गर्नुहोस्
* प्रकाश, अक्सिजन र ब्याक्टेरियाहरूबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुहोस्
* उत्पादन खोल्न सम्म ताजा रहन्छ; विस्तारित शेल्फ जीवनको साथ धातु प्याकेजि lightले प्रकाश, अक्सिजन र ब्याक्टेरियाहरूलाई रोक्न सक्छ; उत्पादनले ताजा रहन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न सक्दछ।
* धातुसँग विकास र नवीनताको लागि ठूलो सम्भावना रहेको छ। अनुप्रयोगहरूको दायरा असीमित छ, मुखमा पानी क्यान्डीहरूको लागि प्याकेजिंगबाट, माइक्रोवेभेबल भिडियोहरू एयरोसोलहरू र अधिकमा। धातु प्याकेजि लगातार सुधार र ग्राहकहरु र उपभोक्ताहरु को आवश्यकताहरु को विकास को विकास गरीरहेको छ।
आज, धातु विभिन्न उत्पादनहरू र प्याकेजि solutions समाधानहरूमा प्रयोग गरिएको छ, तर डिजाइनरहरूले उपभोक्ताहरूलाई आकर्षित गर्न नयाँ अवसरहरूको खोजी गरिरहेछन्। धातु बक्सहरूमा विभिन्न आकार, आकार र सजावटहरू हुन्छन्, जसका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ:
खानपान, पेय पदार्थ, लक्जरी सामान, व्यक्तिगत उत्पादनहरू, घरेलू दैनिक आवश्यकताहरू।
सुविधा अझै पनी उपभोक्ता प्याकेज गरिएको सामान प्याकेजि .को विकासको लागि मुख्य चालक शक्ति हो। पारिवारिक संरचनामा परिवर्तन, लचिलो काम गर्ने घण्टा र यात्रा समयले उपभोग गर्ने बानीमा परिवर्तन ल्याएको छ। प्याकेजि families परिवारहरू सानो र साना हुँदै गइरहेका छन्, जीवनशैलीहरू अझ व्यस्त हुँदै गइरहेका छन्, र प्याकेजिंग उद्योग निरन्तर विकसित हुँदै गइरहेको छ यी सदा परिवर्तन हुने आवश्यकताहरू पूरा गर्न।
धातु प्याकेजि्गमा उच्च कठोरता छ, जसले उत्पादन सुरक्षा सुधार गर्दछ। यसको अवरोध गुणहरूले राम्रो गुणस्तर र अशुद्धताको प्रवेश कायम राख्न सक्दछ, जसले गर्दा सामग्री बिग्रिएको सुरक्षित रूपमा उपभोक्ताहरूसम्म पुग्न सुनिश्चित गर्दछ।
मेटल प्याकेजि्गले नयाँ उपभोक्ता आवश्यकताहरू सजिलै-खोल्न, पुन: प्रयोज्य प्याकेजि and र प्रबन्ध योग्य भागहरू मार्फत पूरा गर्दछ जुन उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार मात्र खोल्न अनुमति दिन्छ। धातुको डिजाइनले माइक्रोवेभ ओभनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ हल्का भोजनको लागि धातु प्याकेजि ofको सुविधा विस्तार गर्दछ।
क्यान्ड खाना धेरै वर्षसम्म सुरक्षित रूपमा खान सकिन्छ र आजको भोजनको लागि वा भोलि आपतकालिनको लागि उपयुक्त छ। ट्या tank्की फ्रिज गर्न वा स्थिर गर्न आवश्यक पर्दैन। तिनीहरूले प्रकाश र अक्सिजनबाट व्यापक संरक्षण प्रदान गर्दछ, र छाप लगाइन्छ। उनीहरूले भित्री पोषणमा पोषण हुनबाट रोक्नको लागि खाना पनि सुरक्षित गर्न सक्छन्। उत्पादन नमी, धुलो, कृन्तक र अन्य दूषित पदार्थहरूबाट पनि सुरक्षित छ।
The. प्याकेजि more बढी उत्तम छ
एम्बोसिंग र एम्बोसिंग टेक्नोलोजीले म्यान्युफिकर्सलाई नवनिर्मित क्यान डिजाइन उत्पादन गर्न सक्दछ। एम्बोसिंग एउटा यस्तो प्रविधि हो जसले उठाइएको आवरण (भित्रबाट बाहिरी) बाट सजावट वा राहत दिन्छ, जबकि डे-प्रोट्रुसनले अन्तराल कन्टुर्स (भित्रबाट बाहिरी भित्र) सजावट उत्पादन गर्दछ। उत्तल र अवतल भागहरूको फाइदा यो हो कि अवस्थित बाह्य आयामहरू कायम राख्न सकिन्छ, त्यसैले त्यहाँ यातायात र प्यालेट स्थान परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन। पूर्व धातु मुद्रित ग्राफिक्सको साथ दर्ता गरिएको छ दृश्य र स्पर्श प्रभाव अधिकतम गर्न। छवि र ग्राफिक्स, ब्रान्ड लोगो, स्पर्श चेतावनी र ब्रान्ड मान्यता कार्यहरू सबै सुधार गर्न सकिन्छ।
आजकल, वातावरण संरक्षणको अवधारणा गहिरो रूपमा मानिसहरुको हृदयमा जडिएको छ, र मेटल प्याकेजि that जुन पुन: परीक्षण गर्न सकिन्छ उपभोक्ताहरूले मनपर्दछ; धातु प्याकेजि्ग यसको अन्तर्निहित विशेषताहरु गुमाए बिना अनिश्चित कालको लागि १००% पुन: साइकल गर्न सकिन्छ। यो एक स्थायी रूपमा उपलब्ध संसाधन हो, व्यापक रूपमा विश्वव्यापी रीसायकल, र उच्च रिसाइक्लि materials दरको साथ प्याकेजि materials सामग्री मध्ये एक हो। इस्पात र एल्युमिनियम संसारका सबैभन्दा प्रचुर स्रोतहरू हुन्, यद्यपि पुनर्चक्रित सामग्रीहरूले प्रशोधनको वातावरणीय प्रभावलाई घटाउँछन्।
सबै प्रमुख प्रतिस्पर्धी प्याकेजि materials सामग्रीहरूमा, धातुको उच्च रिकभरी र रिकभरी दर छ, र यो वर्ष बर्ष बढ्दै गइरहेको छ: - २०१ In मा स्टील क्यान र एल्युमिनियम पेय क्यानको रिकभरी दर क्रमशः %०% र 75 75% थियो; रिसाइक्लि reducedले कम ऊर्जा खपत र ठूलो मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ।
ढक्कनको साथ धातु भण्डारण टोकरी, टिन बक्स, टिन बक्स प्याकेजि।, सीडी भण्डारण केस, घण्टी पुल ओपनर पंजा हुन सक्छ, निजीकृत टिन बक्स,